Etazonia: 4 marsa andro fiarovana ny fanabeazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2010 20:08 GMT
Vakio amin'ny teny 简体中文, 繁體中文, Italiano, македонски, Español, বাংলা, English
Mizotra any an-takonana any ny fiomanana ho amin'ny Androm-pirenena 4 marsa hihetsehana ho fiarovana ny fanabeazana any amin'ny anjerimanontolo maro any Etazonia. Manohitra ny fahalafosan'ny sara-pisoratana anarana, ny fanavakavahana ny mpianatra ary mitaky ny hananganana fanabeazam-pirenena tsy andoavam-bola.
Fa any California no tena ifantohan'ny hetsika satria manerana ny firenena (state) mihitsy ny fiomanana hatrany amin'ny Anjerimanontolon'i (UC) Berkeley ka hatrany amin'ny Campus'n'i Oakland. Ampirisihana ny mpandray anjara hampiasa ny tetikady rehetra heveriny fa mety na sahaza ny zavamisy. Azo ampiasaina avokoa na fitokonana (nisy fampilazana), na fitokonana tampoka, diabe, fihaonana, fibodoana, fipetrahana an-dalambe na seminera. Ny hiaka fampiraisana dia ny fanehoam-pahatezerana noho ny nampakarana ny saram-pianarana —hatrany amin'ny 32%—any amin'ny Anjerimanontolom-panjakana ao California.
Ao amin'ny Twitter dia ny hashtag #March4 no ampiasain'ny olona hahalalana sy hampitana ny vaovao farany momba ny hetsika. Nizara vaovao nahitana ny fandraisan'i Jack O’Connel, mpanara-maso ny firenen'i Californie, anjara tao amin'ny fihaonana nomanina tao amin'ny Tranomimandan'i Colton any Monterey i @Lavika. Trano saimbolika moa ny tranomimandan'i Colton noho izy toerana voalohany nanorenana sekoly tany California.
Ao amin'ny vohikalan'ny Fightback! News no ahitana lahatsoratra miresaka fa tena tsindrian-daona tokoa ny any amin'ny tobim-pianarana isankarazany any California any. Nobodoin'ny mpianatra sy ny mpiasa ny Tranobe Fandraharahana ny tobim-pianaran'ny Anjermanontolon'i ( UC) Irvine tamin'ny 24 Febroary. Iray amin'ny takian'izy ireo ny fanampiana ara-bola ho an'ny mpianatra tsy manana antonta-taratasy.
Lohahevitra iray mangotrangotraka anisan'ny hanaovana hetsika ny 4 marsa ihany koa ny fifandraisana eo amin'ny samihafa volonkoditra. Nanao fihetsiketseham-panoherana ny fandikan-dalàna noho ny fankahalana sy ny tsy fahampian'ny fahasamihafana ao anatin'ny rafitry ny Anjerimanontolon'i California (UC) ny sendikan'ny mpianatra avy ao amin'ny UC San Diego sy ny mpianatra mainty hoditra avy ao Berkeley ary ny UCLA Afrikan Student Union(Sendikàn'ny mpianatra Afrikana University of California Los Angeles). Efa nisy ankivy moa notontosaina tao amin'ny tobim-pianaran'ny Ajerimanontolon'i (UC) Berkeley tamin'ny voalohan'ny volana marsa.
Navoakan'i rgiwaproductions ity lahatsary manaraka ity manasongadia ny asam-pihetsiketsehana sasany.
Hetsika Ankivy notontosaina ny voalohan'ny marsa tao UC Berkeley
Misy ihany koa ny fandraisaa anjaran'ny mpianatra avy any amin'ny morontsiraka atsinanana toy ny avy ao amin'ny Kolejy Hunter, Anjerimanontolon'i New York sy ny Anjerimanontolom-panjakana avy ao New York (SUNY), ary ny The New School nahitana mpianatra maro naneho ny fiaraha-mientany tany amin'ny bolongana sy ny valam-piarahamonina isan-karazany. Nahitana fiakarana 14% ny saram-pianarana tao amin'ny firenen'i New York tamin'ny fararano teo. Tao amin'ny bolongana iray Takethecity, no nisy fanambarana milaza fa leon'ny fandovam-bola izy “noho ny ‘krizy’ nateraky mpanankarena sy ny mpitana birao zary manome vahana azy ireo koa.”
Manoratra ihany koa ny ao amin'ny Occupy Boston fa notapahina (nofoanana) ny tetibolan natokana ho an'ny fanabeazana ho an'ny daholobe any Massachusetts ka misy ny fiakaran'ny saram-pianarana US$400 isan'enimbolana. Nikarakara seminera izy ireo nanomboka tamin'ny 4 ora folakandro ka hatramin'ny 7 ora hariva izay niresahan'izy ireo ny lohahevitra tahaka ny fiantohana ara-bola ny sekolim-panjakana any Massachusetts, ny demokrasia ao anatin'ny rafi-panabeazana, ny fahazoana mianatra sy ny fahalafosan'ny (na fahamoran'ny) fanabeazana avy amin'nysekolim-pnjakana any MA.
Nianga avy tamin'ny fivoriana notontosaina tamin'ny 24 Oktobra 2009 tao amin'ny Anjerimanontolon'i California (UC) Tobim-pianaran'i Berkeley izay nahitana mpampianatra, mpianatra, ray aman-dreny, fikambanana, sendikà ary izay rehetra liana amin'ny sehatra fanabeazana nasaina handray anjara amin'ny tapatapak'ahitra miompana amin'ny fiakaran'ny vola lany amin'ny fanabeazana ity Androm-pirenena Hihetsehana tontolo andron'ny 4 Marsa ity. Nihoatra ny 800 ny isan'ny nanatrika ny fivoriana ary ny tena atahoran'izy ireo indrindra dia hoe hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny mpianatra avy amin'ny sarangan'ny mpiasa sy ny avy amin'ny fiaraha-monina (tsy fotsy hoditra) io fiakaran'ny saram-pianarana io. Nampiseho ny fiaraha-mientany tamin'ny fihetsiketsehany sy ny olona mivondrona manohitra ny fiakaran'ny saram-pianarana ry zareo ka nanapa-kevitra araka ny lanieran'ny besinimaro fa hatokana ho Androm-pihetsehana ny 4 marsa.
Iray volana taorian'io (fivoriana io) dia nobodoin'ny mpianatry ny UC Berkeley ny tranomimandan'i Wheeler, efitra lehibe famakiam-boky, ary nanao fangatahana hisian'ny fampianarana (an'ny fanjakana) maimai-poana. Ny lahatsary YouTube navoakan'ny OccupyEverything2009 moa dia ahitana ny ezaka asa mivantana nataon'ny mpianatra.
Endrika fiaraha-mientana hafa ihany koa ny fanapariahana ny sarim-pamantarana ny fanekana ny 4 marsa manerana ny tobim-pianarana kolejy manerana an'i Etazonia. Namoaka ny sarin'ireo saina kely famantarana naparitaka tany California sy i Etazonia ahitana ny fomba fiteny entina hanohanana ny hetsika 4 marsa ny New School Reoccupied Blog.